YbCoin စျေး - အွန်လိုင်း YBC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို YbCoin (YBC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ YbCoin (YBC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ YbCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ YbCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
YbCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
YbCoinYBC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1800.18YbCoinYBC သို့ ယူရိုEUR€1502.41YbCoinYBC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£1301.26YbCoinYBC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.1656.26YbCoinYBC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr15017.02YbCoinYBC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.11171.95YbCoinYBC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč38945.36YbCoinYBC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł6825YbCoinYBC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$2251.76YbCoinYBC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$2327.02YbCoinYBC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$35852.48YbCoinYBC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$13990.22YbCoinYBC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$10060.74YbCoinYBC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹134210.44YbCoinYBC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.276034.14YbCoinYBC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$2401.9YbCoinYBC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$2522.33YbCoinYBC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿56247.07YbCoinYBC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥11738.79YbCoinYBC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥195850.59YbCoinYBC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩2010171.02YbCoinYBC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦739621.65YbCoinYBC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽136109.63YbCoinYBC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴50414.72
YbCoinYBC သို့ BitcoinBTC0.0319 YbCoinYBC သို့ EthereumETH0.896 YbCoinYBC သို့ LitecoinLTC8.07 YbCoinYBC သို့ DigitalCashDASH6.95 YbCoinYBC သို့ MoneroXMR6.82 YbCoinYBC သို့ NxtNXT29558.96 YbCoinYBC သို့ Ethereum ClassicETC93.41 YbCoinYBC သို့ DogecoinDOGE29936.99 YbCoinYBC သို့ ZCashZEC10.39 YbCoinYBC သို့ BitsharesBTS15657.97 YbCoinYBC သို့ DigiByteDGB22502.25 YbCoinYBC သို့ RippleXRP1922.59 YbCoinYBC သို့ BitcoinDarkBTCD5953708982.9 YbCoinYBC သို့ PeerCoinPPC1843.38 YbCoinYBC သို့ CraigsCoinCRAIG78715239945040.52 YbCoinYBC သို့ BitstakeXBS725.29 YbCoinYBC သို့ PayCoinXPY720072.01 YbCoinYBC သို့ ProsperCoinPRC180018001800.18
YbCoinYBC သို့ DarkKushDANK55392205887254.72 YbCoinYBC သို့ GiveCoinGIVE373897389738973.88 YbCoinYBC သို့ KoboCoinKOBO138649.86 YbCoinYBC သို့ DarkTokenDT1658.15 YbCoinYBC သို့ CETUS CoinCETI24926492649270.93
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 18 Apr 2021 11:25:01 +0000.